merolagani - नेशनल हाईड्रोका लगानीकर्ताले १७ वर्षसम्म केही पाएनन्,अब हात खाली हुँदैनः पाण्डे
नेशनल हाईड्रोका लगानीकर्ताले १७ वर्षसम्म केही पाएनन्,अब हात खाली हुँदैनः पाण्डे
Apr 02, 2021 05:51 PM Merolagani
नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले अर्को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लाभांश पाउने कम्पनीले दावी गरेकाे छ । अर्को वर्षदेखि बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना सहित काम गरिरहेको उक्त कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताएका छन् ।
नेशनल हाईड्रोपावरमा देखिएको व्यवस्थापनबीचको किचलो सकिएको र संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेकाले उक्त कम्पनी नाफामा गएको उनको तर्क छ ।
कम्पनीले ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रवती र १४ मेगावाटको इरखुवा आयोजना निर्माण गर्दै छ ।
निजी क्षेत्र आएको करिव २०/२१ वर्ष भयो । २०५६ सालदेखि निजी क्षेत्र सक्रिए भएको हो । त्यो भन्दा अगाडि निजी क्षेत्रकाे जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहभागी थिएन् ।
तत्कालिन उर्जामन्त्री शैलजा आर्चायले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्ने प्रत्याभूति दिएपछि निजी क्षेत्र सक्रिय भएको हो ।
कोभिडको मारमा परेका निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा छैन् । एकातिर प्राधिकरण सिष्टममा बढी बिजुली भयो भन्छ । प्राधिकरणलाई बिजुली चाहिदैन भन्ने स्थिति छ । उत्ता, विद्युत विधेयक आएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र लाइसेन्स दिन्छु भनिरहेकाे छ।
अर्काेतिर, राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रबाट निकाली दिएर लगानी नहुने स्थिति थियो । यो स्थिति २०७७ को साउन महिनासम्म थियो । कोभिडको बीचमा राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएपछि लगानीयोग्य क्षेत्र भनेर नीति ल्याउनु भयो । त्यसपछि यो क्षेत्रमा पुनः रकम आउन थाल्यो । अहिले यो क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक स्थिति आएको छ ।
पछिल्लो समय रुग्ण आयोजनालाई सावाँ र ब्याज तिर्न कठिन भएपछि फेरी पुनरकर्जाको नीति आएको छ । यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । यति आयो भने केही बिग्रेका कुराहरुलाई पुन निर्माण गरेर हामी फेरी अगाडि बढन सक्छौं ।
हामी २/३ कुराले पछाडि परेका छौं । विद्युत विधेयक संसदमा गएको पनि एक वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसको अत्तोपत्तो छैन् । त्यो नहुँदा नयाँ बजार खोज्ने कुरामा पछाडि परेका छौं । विद्युत उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, उत्पादित विद्युत बिक्री गर्नका लागि बजार खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
बिजुली भनेको उपभोग्य बस्तु हो । यसलाई उपभोग गर्न सकिएन भने खेर जान्छ । उत्पादित बिजुलीलाई न ‘सो’ गरेर न त संचित गरेर नै राख्न सकिन्छ । उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन्, खपत पनि गर्नु पर्छ । यसमा हामी पछाडि परेका छौं ।
यो ठूलो समस्या हो । ती चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका आयोजना के कति कारणले पुगे भनेर हेरिनुपर्छ र वर्गिकरण गरिनु पर्छ ।
ती आयोजना कतिपय आफ्नै अर्थात व्यवस्थापनका कारणले रुग्ण भएका होलान् । नेशनल हाईड्रो पावरकै कुरा गर्ने हो भने १७/१८ वर्ष एक पैसा पनि लाभांश दिन सकेन् । यसलाई पनि रुग्ण आयोजना नै भन्नु पर्यो । यो आफ्नै आन्तरिक कारणले रुग्ण भएको हो, सकारी कारणले होइन् ।
लगानी गर्नेले पनि खोलामा पानी छ कि छैन्, आयोजना चलाउने मानिसको योग्यता के छ ? व्यवस्थापन टिम कस्तो छ ? प्रसारण लाइन ठिक छ कि छैन ? यी सबै हेर्नु पर्छ । बैंकले पनि लगानी गर्न दवाव आउदा बित्तीकै जुन पायो त्यही आयोजनामा लगानी गर्ने होइन् । सबैको जिम्मेवारीको कुरा हो । जो हामी यो सेक्टरमा लागेका छौ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।
अनुशासनमा बस्ने, राम्रो आयोजना छान्ने, राम्रो विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
एनएचपीसीका पाइप लाइनमा भएका आयोजना निर्माण भएसँगै त्यसबाट हुने आम्दानीले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने हो । अहिले अएनएचपीसीका तीन आयोजना भए ।
अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति लगानीकर्तालाई पूर्ति गर्न सक्छाै सक्दैनौ त्यो भने अर्कै कुरा हो । १७ वर्ष अगाडि जग्गामा लगाएको भए अहिले कति पुग्थ्यो, हाइड्रोमा लगानी गरेकाले यति भयो भन्ने पनि गरिन्छ । अहिले त्यो तुलना गर्नु राम्रो कुरा होइन् । तर, एनएचपीसीका अन्य आयोजना हुन्छन् । त्यसैले कम्पनी स्वस्थ्य रहन्छ ।
इरखुवा, तल्लो इन्द्रावती बाहेक कास्कीमा एउटा आयोजना अध्ययन गर्दै छौं । त्यो आयोजना बनाउन सजिलो भने देखिएको छैन् ।
इरखुवामा ६७ प्रतिशत शेयर एनएचपीसीले होल्ड गरेको छ । ३०/४० जना शेयर होल्डर आएर लगानी गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले १७२ करोड लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएर फाइनान्सियल क्लोज भइसकेको छ । १४ मेगावाटको आयोजना हो । त्यसमा समस्या छैन् ।